Sidee si ay u gudbiyaan SMS iyo Xiriirada ka Symbian in Android
Waxaa jira yimaado wakhti marka aad daalan ee Nokia ee Symbian OS oo aad rabto in ay ku boodaan markab in xiddiga cusub ee telefoonada gacanta, qalabka Android. Beddelidda telefoonka ah waa mid aad u fudud. Si kastaba ha ahaatee, in ay xog ka Symbian wareejiyo Android, sida xiriirada, oo aad ka heli laga yaabaa in ay yara adag. Wondershare MobileTrans Ah - Xaaladdan, waxaad taageero ka ah qalab xisbiga saddexaad sawiri kartaa. Waa barnaamij kala iibsiga Symbian in Android, Awood-aad si ay u gudbiyaan xiriirada ka Symbian in Android muuqan. Ka sokow xiriirada, waxa kale oo kuu ogolaanaysaa inaad aad nuqul ka photos, videos, fariimaha qoraalka ah iyo music. Halkan waxay leedahay Hanuuniye buuxa si aad u hesho xogta si fudud iyo si ammaan ah u wareejin u dhexeeya mid ka mid ah aad telefoonada gacanta. Fiiri this infographic .
Demi Symbian in Android, wax ka yar 10 daqiiqo
Ma aha oo kaliya xiriirada, barnaamijka Symbian in Android kala iibsiga ka caawisaa si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah, music, video iyo sawiro ka Symbian si fudud Android.
Xiriirada nidaameed ka Symbian in Android, iyadoo magaca shirkadda, cinwaanka guriga, cinwaanka email iyo in ka badan info.
Fariimaha qoraalka ah ka phone Symbian oo dhan dhaqaaq phone Android fudayd.
Copy photos, music video iyo in waqtiga aan lahayn, si aad ku raaxaysan karaan on go ah.
Si fiican u shaqeeyaan taleefannada Nokia Symbian iyo qalabka Android, sida Samsung, LG, HTC, Sony, Motorola, iwm
Barnaamijka wuxuu leeyahay interface aad u kooban oo dareen leh. Markaasaa kaliya hal click , wax kasta waxaa loo sameeyaa.
Transfer oo keliya ma aha Xiriir
Isbedel ayaa kaliya ma ahan xiriirada, laakiin fariimaha koobi qoraalka, video, sawiro iyo music isku mar.
Taageer badan oo Android Devices
Sidaa daraadeed, si aad u aalad Android, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, Sony, LG, Motorola, Huawei, Acer ama kuwa kale ku wareejin karo files ka phone Nokia Symbian.
Waxba ma ahan wixii sidayaal phone yihiin, barnaamijka kaa caawinaysaa in aad u haajiraan xogta u dhexeeya laba telefoonada fudayd.
Waxaan doonayaa in aan wareejiyo ka:
Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 4.4
macruufka 5, macruufka 6 & 7 macruufka
Si aad u
Waxaad isticmaali kartaa:
Hal-click barnaamijka kala iibsiga phone si ay u gudbiyaan xiriirada, sawiro, video, music iyo SMS ka Symbian in Android. Baro faahfaahinta hoos ku >>
Sida loo Copy Xiriirada, Messages, Video, Photos iyo Music ka Symbian in Android
Tallaabada 1. Run MobileTrans
Si aan ku bilaabo, ordo Symbian ay u kala iibsiga Android barnaamij Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka. In uu furmo suuqa hoose, dooran Phone in hab Transfer Phone oo guji Start .
Tallaabada 2. Connect Labada Qalabka Symbian iyo Android inay PC
Ka qaada fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan qalabka telefoonka iyo Android Nokia Symbian si aad u PC. Ka dib markii la aqoonsan yahay, telefoonka Symbian la soo bandhigi doonaa on bidix iyo qalabka Android on xaq u furmo.
Tallaabada 3. dhaqaaq fariimaha qoraalka, Music, Video, Photos iyo lambarka taleefoonka ka Symbian in Android
Xogta in la dhaqaajin karin ayaa la hubinayaa. Haddii aad rabto in aad kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada Symbian in Android, waa in aad uncheck xogta kale. Markaas, bilowdo Symbian in Android kala iibsiga adigoo gujinaya Start Copy.
Raadso si sugan
Hawshan waxaa ilaaliya VeriSign.
Ku qanaca Balanqaad
Dhammaan alaabta aannu soo leh 30 maalmood Guarantee Money Back.
Jawaab Email 24 saac & Live Chat gudahood.
Kalsoonyahay by Malaayiin
Waxaan hadda u adeegi badan 30.000.000 macaamiisha ee dunida oo dhan.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Nokia in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Nokia si iPhone?
Sida loo Copy Nokia Faylal ay si Android Phone / Tablet
Sida loo Demi Data ka iPhone in Android
Sida loo dhaqaaq Xiriirada in a New Android Phone?
Sida loo Copy Faylal ay ka iPad in Android?
Sida loo dhaqaaq Faylal ay ka One Android Phone in kale?
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga One HTC in kale?
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Photos, SMS, Video iyo Xiriirada ka Symbian in Android